Maarso – Blast Off to Kindergarten
Dugsiga Laysu Diyaariyo
Xirafadaha Layliska Bishan
Ilmahaaga ku dhiirrigali in ay sameeyaan waxyaalo cusub iyo in ay sii wadaan oo aysan ka harin marka ay qabanayaan waxyaalo adag. Ilmahaaga waxa ay dugsiga kala kulmi doontaa waayoaragnimo cusub. Kaddib marka ay bilaabaan dugsiyada barbaarinta, caruurta badankooda waxa ay isku dayaan waxyalo cubus iyo in ay dhammaystiraan daraasaadka.
Ilamahaaga ka dhaadhici micnaha ka dambeeya in si dhab ah hawsha loo qabto. Ilmahaaga ka dhaadhici waxa ka dambeeya marka ay ayada dadaalka ay ku celceliso hawsha adag ay qabanayso iyo in waxa guul ay ka gaarayso.
Ilmahaaga weydiiso in ay uu kuu sheedo sida uu adduunka ahaan lahaa haddii aan la haysan gawaari, teleefonno, ama telefishan. Isaga weydii haddii ay fududdahay ama adagtahay in uu qof kale waxakan oo idil in uu abuuro.
Ilmahaaga la qorshayso mashruuc dhamaaystiriddiisa ay ku qaadanayso dhowr tillaabood. Qoraal ku diyarii tillaaboyinkas. Iska hubso in qayb kasta oo mashruuca la dhammaystiro inta aan loo gudbinin qaybta xigta ama wax kale oo cusub.
Ilmahaaga ku dhirriigali in ay laylis ku qaatan warqado qorista ay ayada ay qorayso. Waa muhiim in ilmaha ay bartaan magaca koobaad iyo kan dambe ee daabacan. Waxa aad caruurta siisaa fursadaha ay ku dhawaaqaan magacooda. Waxa aad ilmahaaga siisaa qalmaan, qalmaanta midabyada leh iyo warqad ilmahaagana ku dhiirrigali in ay laylis ahaan ay magaceeda ku qor qorto warqadda. Ilmahaga magacooda dhowr jeer qor qor.
Layliska Xirfadaha Bishan
Ilmahaaga ka caawi in uu cuntada u cuno si “caruur weyn.” Marka uu bilaabo dugsiga barbaarinta, ilmahaaga waa in uu si fiican ugu fariisan kursi miis leh, cunto cuno asagoon la cawinin, iyo qaado iyo forgeetada uu isticmaalo.